अभिनेत्री सिल्पाको एक बर्षकी छोरीलाई पनि कोरोना लागेपछि, भावुक हुँदै सम्झिन भगवान – Sandesh Press
May 11, 2021 235
एजेन्सी । भारतमा अहिले कोरोना महामारीका रुपमा फैलिएको छ । थुप्रै कलाकार पनि कोरोना संक्रमित छन् । नायीका शिल्पा सेट्टी र उनको परिवारलाई पनि कोरोना पुष्टि भएको छ । शिल्पाको एक वर्षकी छोरीलाई कोरोना पुष्ट भएपछि उनी निकै भावुक भएकी छन् । सानो छोरीले यति ठूलो संघर्ष गर्नु परेको भन्दै शिल्पा दुखी भएकी हुन् । कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरले भारतमा वि ध्वं श मच्चाइरहेको छ । मुम्बई र महाराष्ट्रमा पछिल्लो दिन थुप्रै ठूला सेलिब्रिटी पनि यो रोगको चपेटमा आए ।
आलिया भट्ट, रणविर कपुर, दिपीका पादुकोणलगायतले कोरोनासँग लडिरहँदा बलिउड अभिनेत्री शिल्पा सेट्टीको परिवार पनि कोरोनाको कारणले पिडित बनेको छ । उनको आमा, श्रीमान र १ बर्षकी छोरीलाइ समेत कोरोना देखिएपछि उनी भावुक बनेकी हुन् । उनले इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा यसबारे पोस्ट गर्दै त्यसवारे जानकारी दिएकी हुन् ।
उनले लखेकी छन्, ‘पछिल्लो १० दिन हाम्रो लागि निकै मुश्किल रह्यो । मेरा सासु–ससुरा कोभिड द्वारा संक्रमित पाइए । त्यसपछि समिशा, वियान–राज, मेरी आमा र राज पनि यसको चपेटमा आए । आधिकारिक दिशानिर्देश र डाक्टरको सल्लाह अनुसार सबैजना होम आइसोलेशनमा आफ्नो कोठामा छन् ।’
Prevके कोच प्रमोदले गल्ती गरेकै हुन् त? भ्वाईसबाट बाहिरिएपछि सञ्जु यसो भन्छिन् (हेर्नुस् भिडियो)
Nextश्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ महत्वपूर्ण सुत्रहरू ! हरेक पुरूषले पढ्नुपर्ने कुरा !
अत्यावश्यबाहेकका सबै सेवा बन्द हुने गरी आजदेखि भदौ ५ गते मध्यरातसम्मलाई कडा निषेधाज्ञा
अन्ततः काठमाडौं उपत्यकावासीको लागि आएको यो खुसीको समाचार, बल्ल धेरै आशा पलायो
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (5737)